Noopept गाइड: Noopept तपाईं के गर्न सक्दछ? - शांगके केमिकल
Noopept गाइड: Noopept तपाईं के गर्न सक्दछ?
Noopept पाउडर एक न्यूरोप्रोटेक्टिव औषधि हो कि दिमाग को कार्यहरु लाई बढावा दिन्छ जस्तै एकाग्रता र मानसिक स्थिरता। यदि तपाईं शार्प फोकसको प्लसको साथ केहि फोटोग्राफिक मेमोरी पाउन चाहनुहुन्छ भने, यो नट्रोपिक चहकिलो कवचमा तपाईंको नाइट हुन सक्छ।
यो नूट्रोपिकको संश्लेषण रसियामा मध्य 90 ० को दशकको हो। चिकित्सा वैज्ञानिकहरूले रूसी बजार र पूर्वी यूरोपमा संज्ञानात्मक वृद्धिकर्ताको रूपमा बिक्रीको लागि Noopept पाउडर पेश गरे। धेरै बर्षमा, स्मार्ट ड्रग नूपेप्ट अनुभूति बढाउनको लागि एक शक्तिशाली नूट्रोपिकको रूपमा स्वागत गरिएको छ। जे होस्, नोपप्टले तनाव, डिप्रेसन र चिन्तालाई पनि कम गर्दछ।
यो लिने प्लस संज्ञानात्मक बढाउने औषधि के यो Noopept साइड इफेक्ट नगण्य छन्।
Noopept दिमाग लाई कसरी गर्छ?
Noopept nootropics हिप्पोकैम्पस र दिमाग कोर्टेक्समा मस्तिष्क-व्युत्पन्न न्युरोट्रोफिक कारक (BDNF) को उत्पादनको गति बढाउछ। यस न्युरोट्रोफिनले महत्त्वपूर्ण न्यूरन्सहरूको अस्तित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जुन सीखने र मेमोरीमा मद्दत गर्दछ।
BNDF न्यूरन्सको बचाउ को निरीक्षण गर्दछ। यो स्नायु कोशिका को विकास र भेदभाव को लागी खाता हो। यो संयन्त्रले न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगहरू जस्तै अल्जाइमर र डिमेन्शियालाई रोक्दछ। BNDF ले अल्फा तरंगहरू पनि बृद्धि गर्दछ जुन लामो अवधिको मेमोरीमा मद्दत गर्दछ।
नोपपिप्ट र piracetam सँग समान संयन्त्र छ। स्मार्ट ड्रगले ग्लूटामेट रिसेप्टर्सलाई तिनीहरूको संश्लेषणलाई परिमार्जन गर्न लक्षित गर्दछ र बाँध्छ। ग्लुटामेटको उच्च स्तरले न्युरोनल कोशिकाको अपोपोटोसिस परिणाम दिन्छ जबकि कम स्तरहरूले मानसिक कार्यहरूमा हस्तक्षेप गर्दछ। चिन्ताको लागि Noopept मस्तिष्क कोशिकामा ग्लूकोजको बृद्धि गर्न उत्तेजित गर्न काम गर्दछ, त्यसकारण, सकारात्मक मानसिक स्पष्टतालाई असर गर्दछ।
किन मानिसहरूले Noopept लिन्छन्?
१ 1996 XNUMX in मा यसको स्थापना भएदेखि, Noopept सेरेब्रल भास्कुलर अपर्याप्तता भएका बिरामीहरूको लागि औषधीको औषधी रहेको छ। यसका साथै, यो आयुसँग सम्बन्धित मेमोरी ल्याप्स वा डिमेंशियासँग संघर्ष गर्नेहरूका लागि औषधि हो।
चिन्ताको लागि Noopept मानसिक स्थिति बढावा दिन को लागी एक औषधी को रूप मा उपलब्ध छ। केही वयस्कहरूले स्मार्ट ड्रग खाइरहेका छन् अल्जाइमर र पार्किन्सन रोगका लक्षणहरूको प्रतिरोध गर्न।
व्यक्तिले अन्य nootropics भन्दा बढि यो औषधि रुचाउँछन् किनकि यो तत्काल काम गर्दछ। फाइदाहरू तुरुन्तै महसुस हुन्छन् noopept जोखिम न्यूनतम छन्। यसका साथै, खुराक पाउडर snorting, sublingual प्रशासन, वा गोलीहरु निगल को विकल्प संग धेरै सानो छ।
Noopept लिदाका फाइदाहरू?
संज्ञानात्मक कमजोरी को लक्षणहरु लाई कम गर्दछ
संवेदनाले गर्दा संज्ञानात्मक गिरावट आउँदछ। बुढेसकालको कारण मस्तिष्कको कोषहरू बिग्रेको हुन्छ, जसले मेमोरी गुमाउँछ।
डिप्रेशनको लागि Noopept ले फ्रि रेडिकलको बिरूद्ध कार्य गर्दछ, जुन अक्सिडेटिभ तनाव र सेल डिजेनेरसनका लागि जिम्मेवार हुन्छ। तसर्थ, यस न्यूरोप्रोटेक्टिव औषधि सेवन गर्नाले उमेर सम्बन्धित संज्ञानात्मक कमजोरीलाई उल्ट्याउँछ।
Noopept nootropics तपाईंको मेमोरी तिखार्न, सतर्कता, र सिक्ने क्षमता सुधार। ड्रगले अल्फा तरंगहरू र मस्तिष्क-व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारकहरू माथि उठाउँछ, जुन सतर्कता र मानसिक समन्वयको लागि जिम्मेवार हुन्छ।
यसलाई धन्यबाद noopept लाभहरु, विद्यार्थीहरूले अब एक प्रमुख परीक्षाको लागि तयारी गर्दा अध्ययन औषधिको रूपमा पूरकको लागि रोजिरहेका छन्।
Noopept मस्तिष्क उत्तेजकले ध्यान केन्द्रित रहन मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँलाई तार्किक तर्कमा भाग लिन र फोकस नगुमाईकन जटिल कम्प्युटेसनहरू समाधान गर्न अनुमति दिन्छ। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि स्मार्ट ड्रगले न्यूरन्सलाई उत्तेजित गर्दछ, जसले सतर्कतालाई नियमित गर्दछ।
Noopept डिप्रेसन र चिन्ता कम गरेर मानसिक राज्य लाई फाइदा। यसले तपाईंको उर्जाको स्तर बढाउँछ र तपाईंलाई निरन्तरता दिन प्रेरित गर्दछ।
डिप्रेशन को लागि Noopet तपाइँको मूडहरु माथि उठाउँछ।
Noopept कोषहरु मा ऑक्सीडेटिव तनाव र सूजन कम गर्दछ। भिट्रो अध्ययनका धेरैले पुष्टि गर्दछ कि स्मार्ट ड्रगले फ्रि रेडिकलहरूको काउन्टर गर्दछ। यसका साथै गठियासँग सम्बन्धित दुखाइ कम हुन्छ।
के Noopept तपाईंको लागि उपयुक्त छ?
Noopept खरीद यसको लायक छ यदि तपाईं मेमोरी ल्याप्स वा अन्य कुनै न्यूरोडोजेनरेटिभ रोगहरूबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। उत्पादन सुरक्षित छ र तपाईंको शरीरले यसलाई गम्भीर नोप्टप्ट साइड इफेक्टको कारण बिना सहन गर्न सक्छ।
चाहे तपाइँ एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ, एक व्यापारी, वा एक एथलीट, noopept तपाइँको सबै आवश्यकताहरु लाई कभर। यो एक संज्ञानात्मक वर्धकको साथै एक तनाव रिलिभर र मुड स्टेबिलाइजर हो।
Noopept पाउडर कसरी लिने?
तपाईको शरीरको तौलको आधारमा एउटा दैनिक दैनिक नोप्टप्ट १०mg र m०mg बीचको हुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई २०० भन्दा कम तौलको नौसिखिए हुनुहुन्छ भने, १०mg विकल्प तपाईको प्रणालीको लागि आदर्श हो। 10lbs माथिको जो कोही पनि उच्च खुराकको लागि जान सक्छ।
यद्यपि तपाइँ आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खुराक फैलाउन सक्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिले खाना पछि noopept लिन्छन्। ओछ्यान अघि पूरकको उपभोग नगर्नुहोस् किनभने यसले तपाईंको निद्रा बान्कीलाई असर गर्न सक्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक बिहान र दिउँसो खुराक तालिका दिन सक्नुहुन्छ।
दीर्घकालीन प्रयोगकर्ताहरूको लागि, Noopept चक्र days० दिन सम्म जान सक्छ। यद्यपि, निश्चित एक महिनाको ब्रेक लिन सुनिश्चित गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं पाँच दिन र दुई दिन छुटको छोटो चक्र गर्न सक्नुहुन्छ।
Noopept पाउडर बिक्री को लागी पिलको रूपमा र नाक स्प्रेको रूपमा पनि उपलब्ध छ। यदि तपाईं औषधिको जैवउपलब्धता बढाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं sublingual प्रशासन को लागी विकल्प गर्न सक्नुहुन्छ। यस विधिले GIT मा पाचन एन्जाइमहरूलाई बाइपास गर्दछ किनकि यो रक्त प्रवाहमा द्रुत रूपमा बन्द हुन्छ। छोटो Noopept आधा जीवन को लागी धन्यवाद, तपाई एक घण्टा वा कम मा प्रभावहरु लाई महसुस गर्नुहुनेछ।
Noopept साइड इफेक्ट र जोखिमहरू?
Noopept साइड इफेक्टहरू त्यस्तो अवस्थामा विरलै हुन्छन् कि तपाईं सहि खुराकमा टाँसिनुहुन्छ। सामान्य लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, मतली, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, र थकान समावेश छ। उच्च noopept खुराक यी नकारात्मक अपशॉट्स को सबै भन्दा लागी दोषी छ। यदि तपाईं खुराक भन्दा बढी, औषधि बेअसर गर्न पानी को एक प्रचुर मात्रामा पिउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पूरकले अन्य औषधीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा केही नोप्ट जोखिमहरू हुन्छन्। स्मार्ट औषधि प्रशासन गर्नु अघि यो आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श लिन एक सुरक्षा उपाय हो।
सर्वश्रेष्ठ Noopept स्ट्याक
यदि तपाईं Noopept सुविधाहरू द्रुत गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो चक्रमा केही स्ट्याक्स समावेश गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यो नयाँ बच्चाको लागि सिफारिस नहुन सक्छ, जसले आफ्नो शरीरमा न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रगको प्रभाव बुझ्न सकेका छैनन्। यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, यो Nootept एकल पूरक को रूपमा nootepic स्ट्याक्स मा हतार गर्नु अघि प्रशासन गर्न को लागी आदर्श हो।
त्यहाँ धेरै स्ट्याकि ideas आईडियाहरू छन् तर हामी केही विकल्पहरू हेरौं।
१.नूपेप्ट, सल्बुटीमाइन, एनिरासिटाम, र सीडीपी कोलाइन
यो noopept स्ट्याक तपाईंको मुड बढाउछ र तपाईंलाई चिन्ता र डिप्रेसन कम गर्दछ। संयोजन दबाबमा वा तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका मानिसहरुको लागि आदर्श हो। न केवल तपाईले तपाईको अनुभूति बढावा दिनुहुन्छ तर तपाईले कुनै पनि चुनौती सामना गर्न तपाईको मनस्थितिलाई उज्ज्वल पार्नुहुनेछ।
10mg नूपेप्ट पाउडर, 750mg aniracetam, र 200mg sulbutiamine लिनुहोस्।
केही प्रयोगकर्ताहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र यस स्ट्याकमा क्याफिन थप्न सक्छ।
२.नूपीप्ट, पाइरासेटम, र कोलाइन
Choline लगभग सबै nootropics को लागी एक परिशिष्ट पूरक हो। एक noopept स्ट्याक मा यो उत्पादन को महत्व टाउको दुख्ने रोक्न को लागी हो, जो स्मार्ट ड्रग पछि पनी हुन सक्छ।
विपरित, piracetam अनुभूति सुधार गर्न neurotransmitters मा अभिनय गरेर Noopept को प्रभाव छिटो। यी दुई रेसट्यामहरूको कार्यको संयन्त्रमा समानताहरूको अर्थ हो कि नोप्याप्ट लाभहरू दुई गुणा हुन्छन्।
१० एमजी नोपिप्ट पाउडरको लागि, तपाई २ जीरा पिरासिटामको साथ स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
N.नूपेप्ट, अल्फा GPC र Huperzine A
Huperzine A दिमागमा Acetylcholine को गतिविधि बढावा दिन्छ। यो न्युरोट्रान्समिटरले मेमोरी, सिक्ने र सतर्कता बढाउछ। अल्फा GPC मस्तिष्क मा choline को इष्टतम स्तर कायम गर्दछ।
अल्फा GPC को बारे मा 300mg लिनको लागि सुनिश्चित।
यदि तपाईं आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न Noopept र adrafinil स्ट्याक गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले क्रमशः २०mg र 20mg को एक खुराक प्रयोग गर्नु पर्छ।
Noopept पाउडर समीक्षा
यहाँ प्रयोगकर्ताहरूबाट केहि noopept समीक्षाहरू छन्;
पी। जिराल्डो भन्छन्;
"मेरो लागि यो अहिले नै एकदम राम्रो काम गर्दछ, तर यो नराम्रो स्वाद चाख्नु हो।"
“म Noopept मा मस्तिष्क कुहिरो प्राप्त गर्दै थिए त्यसैले मैले piracetam र choline थपे। मेरो लागि सँगै आकर्षणको रूपमा काम गर्दछ ... "
“यो मेरो मनपर्ने हो, र मैले यसलाई दुई बर्षदेखि अन र अफ प्रयोग गर्दै छु। मैले धेरै नूट्रोपिक्स प्रयास गरेको छु र म ज्यादातर रेसट्यामहरूको जवाफ नदिएको हुँ, तर मैले भेट्टाए कि नोपप्टले मेरो काम गर्ने र छोटो अवधिको मेमोरी (मानसिक गणित, कुराकानी सम्झना) लाई अझ कडाईका साथ बढाउँदछ। म मौखिक तरलता र निबन्ध लेखनमा महत्वपूर्ण सुधारहरू पनि देख्छु ... "
एम। सान्चे भन्छन्;
“तपाईंलाई ध्यान केन्द्रित राख्न मद्दत गर्दछ। चीजहरू सम्झन वा सम्झनको लागि सजिलो देखिन्छ। कार्यहरूमा तपाईंलाई शून्य गर्न सक्षम गर्दछ। इन्द्रियहरू धेरै सचेत देखिन्छन् र धेरै क्याफिन जस्तो चिल्लोपन छैन। "
"म लगभग दुई महिनाको लागि दैनिक दैनिक १०g लिदै छु र म यसबाट खुसी छु! म यो काममा जानु भन्दा पहिले लिन्छु र म दिनभर तेज छु। “
Noopept तपाईं उच्च प्राप्त गर्छ?
Noopept कुनै उत्साह वा साइकोस्टीमुलेसनको साथ हल्का उत्तेजक हो।
Noopept तुरुन्त काम गर्दछ?
Noopept आधा जीवन and० र minutes० मिनेट बीचमा छ। तपाईंले यस स्मार्ट औषधि को प्रभाव एक घण्टा आधा मा महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ। यो सनसनी चार घण्टा सम्म बाँच्दछ।
के Noopept सबै भन्दा राम्रो Nootropic छ?
रक्तप्रवाहमा Noopept को अवशोषण एक फ्ल्यास मा हुन्छ। यसको मेटाबोलिज्म अन्य रेसट्याम भन्दा छिटो छ। स्मार्ट ड्रग प्रशासनको लगभग २० मिनेटमा चरम सीमामा छ। तसर्थ, जो न्यूनतम noopept जोखिमको साथ तत्काल परिणामहरू चाहान्छन् तिनीहरूको लागि उत्तम पूरक हो।
Noopept सुरक्षित छ?
यो पूरक सुरक्षित छ। तपाइँ या त यसलाई एकल एक्लो पूरकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई अन्य Nootropics मा स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, निश्चित खुराकको अनुसरण गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाइँ एक बर्ष सम्म लामो Noopept को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सुरक्षा उपायको रूपमा, दुई महिना चक्र पछि yourself० दिनको ब्रेक आफैंमा दिन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
के Noopept एक दौड छ?
हो। Noopept पाउडर रेसटम परिवारको व्युत्पन्न हो। जे होस्, यो संज्ञानात्मक वर्धक अधिक دوڑमा भन्दा १००० गुणा बढी सामर्थ्यवान छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं Noopept र piracetam को प्रभावहरु बीच तौल, यदि पूर्व कार्य गर्दछ अधिक छिटो र कुशलतापूर्वक।
अधिक के हो भने, यस संज्ञानात्मक बृद्धिकर्ताको मेटाबोलिज्म अधिकांश नूट्रोपिक्सको भन्दा छिटो हुन्छ।
Noopept प्रतिबन्धित छ?
रसियामा, तपाईले प्रिस्क्रिप्शन बिना Noopept मा शेल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, बेलायतमा, स्मार्ट ड्रग आपूर्ति वा आयात गर्न यो आपराधिक हो। एफडीएले पूरक पर्याप्त लेबल गरिएको सर्तमा नोपप्टको आयातलाई अनुमति दिन्छ। एक over-the-काउन्टर पदार्थ को रूप मा यसको प्रयोग अवैध छ।
Noopept कस्तो लाग्छ?
प्रशासनको एक घण्टा पछि नूपपिक पाउडर, तपाईं एक तीव्र दिमाग, ध्यान, र सतर्कता संग कायाकल्पित महसुस गर्नुहुनेछ।
कसरी Noopept खुराक मापन गर्न?
एकल Noopept खुराक पानीको थोपा जस्तो सानो छ। पाउडर फाराम प्रशासन गर्नको लागि, सटीक खुराक नाप्नका लागि तपाईंले मिलीग्राम स्केल खरीद्नु पर्छ।
कति पटक तपाईं Noopept लिन सक्नुहुन्छ?
Noopept एक दैनिक खुराक हो। तपाईं यी सबै एकैचोटि प्रशासन गर्न सक्नुहुन्छ वा खुराकलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। छोटो अवधि को उपयोग को लागी, तपाई यसलाई एक काम को प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक घण्टा भन्दा पहिले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, केहि प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई एक बर्ष र अधिक लामो रूपमा उपभोग गर्छन्। यस अवस्थामा, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि दुई-दिन छुट्टी पाँच-दिन चक्र वा एक महिना छुट जब यो 60०-दिन चरण हो।
Noopept को कुन रूप राम्रो छ, क्याप्सूल वा पाउडर फारम?
दुबै फार्महरू तपाईको प्राथमिकतामा निर्भर छन्। उदाहरणको लागि, क्याप्सुलहरू ईन्जिट गर्न सजिलो छ किनकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्ट्याक गरिएका छन्। यस विकल्पको नकारात्मक पक्ष भनेको यो छ कि नोपप्ट गोलीहरू मोटा मूल्य ट्यागको साथ आउँदछन्।
यसको विपरीत, Noopept पाउडर फारम बजेट अनुकूल छ। तपाईं यसलाई तपाईंको पेयमा विघटन गर्न सक्नुहुनेछ वा यसमा स्नोर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
चक्र Noopept स्ट्याक्स वा छैन?
स्ट्याकिंगले प्रभावहरू छिटो गरी र नतीजा दोहोर्याएर तपाईंलाई थप लाभहरू दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं Noopept र adrafinil स्ट्याक, तपाईं लामो चिरस्थायी मानसिक ध्यान र अधिकतम ध्यान अनुभव गर्नुहुनेछ। शुरुवातकर्ताहरूले यी कुनै पनि संयोजनहरू गर्नु हुँदैन जब सम्म तिनीहरूको शरीरहरू Nootropics मा सहिष्णुता विकास गर्दैन।
कहाँ Noopept पाउडर किन्न
अनलाइन स्टोरहरू बिकल्पको लागि Noopept पाउडर खोज्दा आदर्श स्थानहरू हुन् किनकि उनीहरूले तपाईंलाई विभिन्न विक्रेताहरू बीच मूल्य निर्धारण तुलना गर्न अनुमति दिन्छ। यसका साथै, तपाई ग्राहक रेटिंग्स मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ र विक्रेता प्रोफाइलको आकलन गर्न सक्नुहुनेछ।
अनगिन्ती कालो बजारहरू देखापरेका छन् तर तपाईं सतर्क रहनु पर्छ र मान्यबाट राम्रो नोपप्ट खरीद गर्नु पर्छ आपूर्तिकर्ता। हामीले तपाईंलाई उत्तम सौदा दिएर उत्तम अनलाइन विक्रेताको लागि तपाईंको खोजीलाई संकुचित गरेका छौं। हाम्रो स्टोरले तपाईंलाई सबै जानकारी दिन्छ जुन तपाईंलाई स्मार्ट ड्रग खरीद गर्नु अघि आवश्यक पर्दछ। हामीसँग हाम्रो ग्राहकहरु लाई वैध nootropics बेच्न को लागी एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छ।
ओस्ट्रोव्स्काया, आरयू, वखितोभा, YV, एट अल। (२०१ 2014)। एडी सम्बन्धित सेलुलर मोडेलमा उपन्यास संज्ञानात्मक बृद्धि Noopept को न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव अपोपोटोसिस र ताऊ हाइपरफोस्फोरिलेसन को ध्यान केन्द्रित गर्दछ। जैव चिकित्सा विज्ञान जर्नल.
Vakhitova, YV, एट अल। (२०१ 2016)। आणविक संयन्त्र विकल्प प्रो-ग्ली डिप्प्टाइड Noopept को कार्य अन्तर्निहित। एक्टि नटुराए।
जैनुलिना, LF, एट अल। (२०१ 2019) न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोपर्टीज सहित औषधि Noopept सेल प्रसार उत्तेजित गर्दैन। बुलेटिन प्रयोगात्मक जीवविज्ञान र चिकित्सा।
ओस्ट्रोव्स्काया, आरयू, एट अल। (२०० 2008) Noopept रट हिप्पोकैम्पसमा NGF र BNDF को अभिव्यक्ति उत्तेजित गर्दछ। बुलेटिन प्रयोगात्मक जीवविज्ञान र चिकित्सा।
ओस्ट्रोव्स्काया, आरयू, रेडियानोभा, एसके, र बेल्निक, पीए (२०० 2008) मूल Nootropic ड्रग Noopept मुस्करीनिक र निकोटीनिक रिसेप्टर नाकाबन्दी संग मुसीहरु मा मेमोरी घाटा रोक्छ। बुलेटिन प्रयोगात्मक जीवविज्ञान र चिकित्सा।
कोभालेन्को, पीएल, एट अल। (२००२) Noopept को एंटी-भड़काउने गुणहरू (Dipeptide Nootropic एजेंट GVS-2002)। प्रायोगिक र क्लिनिकल फार्माकोलजी।
RA NOOPEPT POWDER (१157115१85-0-XNUMX-०)
१. Noopept दिमागलाई के गर्छ?
२. किन व्यक्तिहरू Noopept लिन्छन्?
B. Noopept लिने लाभहरू?
I. के Noopept तपाईंको लागि उपयुक्त छ?
कसरी Noopept पाउडर लिन?
N.नूपेप्ट साइड इफेक्ट र जोखिमहरू?
B.उत्तम Noopept स्ट्याक
N.नूपेप्ट पाउडर समीक्षा